C/raxmaan Faroole: “Farmaajo Dalka God ayuu ku wadaa, wuxuuna kula shirkoobay…” | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA C/raxmaan Faroole: “Farmaajo Dalka God ayuu ku wadaa, wuxuuna kula shirkoobay…”
Madaxweynihii hore ee Puntland, ahna Senator ka tirsan Aqalka Sare ee Baarlamaanka ayaa ka hor yimid go’aanka Baarlamaanka Federaalka ku ansixiyey in Gobolka Banaadir 13 xubnood ku yeesho Aqalka Sare, isagoo eedeyn ba’an u jeediyey Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Isagoo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garowe ayuu caddeeyay inay sharci darro tahay wixii ka dhacay Baarlamaanka, wuxuuna ka digay in Madaxweyne Farmaajo uu dalka ku wado God iyo xaalad halis ah, isagoo kula shirkoobay guddoonka Baarlamaanka ee Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan iyo ku xigeennadiisa.
C/raxmaan Faroole wuxuu ku eedeeyay Madaxweynaha Soomaaliya oo ay ahayd inuu Dastuurka dhowro inuu isagii ku tumanayo, isla markaana aan lagu fiirsan karin waxa uu ku dhaqaaqay, isagoo caddeeyey inay aqbaleynin sharci darrada ay ku socoto madaxtooyada iyo dhibaatada ay dalka u horseedeyso
Senator Faroole wuxuu ku dooday in 13-ka xubnood ee Baarlamaanka Soomaaliya siiyey G/Banaadir si ay uga mid noqdaan Aqalka Sare ay sharci darro tahay, looguna talogalay in dadka lagu kala qeybiyo.
Previous articleKulamo lagu xalinaayo dagaal Beeleedyo oo ka bilaawday Degaanka Feer Feer & Hal Arin oo khilaaf ka jiro
Next articleGo’aanka Sucuudiga ee wadamada debada sanadkaan looga Mamnuucay Xajka sidee u saamaynaa Soomaalida?.
Xukuumada Soomaaliya oo Magacowday guddi Qaran oo 14 xubnood ka kooban (Magacyada)
Dagaalyahanada Al shabaab oo la Wareegay Fariisimo Muhiim ah oo ay ka baxeen Ciidamada DF
Magaalada Muqdisho oo uu ka bilowday GANACSI ay dad badani la yaabban yihiin! + Sawirro
DAAWO: Hadal kasoo yeeray R.wasaaraha itoobiya oo Cabsi & Walaac ku Abuuray Soomaalida aadna loo hadalhayo…
Shil Khasaare geystay oo caawa ka dhacay Muqdisho iyo faahfaahino ka soo baxaya
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo xog Soomaalida ogeyn kashaaciyay xogihii shabaab kasheegeen hoteladii Muqdisho ku weerarayn
Dhagayso: Qaxooti kasoo barakacay Yemen oo dalbaday in dib loogu celiyo Wadankooda…
Dowladda Soomaaliya oo war ka soo saartay Khilaafka Canada iyo Sacuudiga, Lana Safatay…